beChiefs bayakwazi okumele bakwenze ukuqedela umsebenzi
AbeChiefs bayakwazi okumele bakwenze ukuqedela umsebenzi
June 25, 2021 Impempe.com
UYagan Sasman nozakwabo kwiKaizer Chiefs
Ngesikhathi iKaizer Chiefs ishaya iWydad Athletic ngo 1-0 emelenzeni wokuqala womdlalo owandulela owamanqamu kwiCAF Champions League eMorocco, bekuwukuphothula ingxenye nje yomsebenzi, enye isasele.
Okuhle ke wukuthi abadlali beChiefs bayakwazi lokhu, futhi bayakwazi okumele bakwenze ukuqinisekisa ukuthi bagcina befikile emdlalweni wamanqamu, Umdlali wasemuva kwesokunxele, uYagan Sasman uthi bathole amava abangasoze bawakhohlwe eMorocco.
USasman ngomunye wabadlali okwathusa abaningi ukubabona besohlwini lwalabo abazoqala umdlalo eStade Mohammed V njengoba ebengajwayele ukuqala imidlalo.
Kodwa wadlala ngendlela egculisayo ngendlela yokuthi ngeke kuthuze uma engaphinde aqaliswe nakulokhu. IChiefs izobhekana neWydad emlenzeni wesibili eFNB Stadium ngoMgqibelo ngo-6 ntambama.
Funda nala: Ngabe umgadli weChiefs imusha lo?
“Sifunde lukhulu kulowa mdlalo,” kusho uSasman oneminyaka engu-24 nozalwa eKapa. “Sithole igoli ekuhambeni, futhi manje sesilufakile unyawo olulodwa kowamanqamu.
“Sinomdlalo owodwa okumele siwudlale kanti ukuphinde sithole umphumela omuhle kungaba yinto enhle kakhulu kithi,” kuqhuba yena. Ukuvezile ukuthi bebethwele uthayela kunompoya eMorocco futhi kudingeke bazikhandle ukuze babuye bemomotheka.
“Silwe kunzima laphaya… siwine ngo 1-0. Mina bese kunesikhathi ngagcina ukudlala, kodwa ngikwazile ukuyibamba ishisa imizuzu engu-60 yonke. Ngigcine ngikhishiwe sengihlushwa wukunwebeka komsipha ethangeni.
“Kodwa akuyona into etheni ngoba sekupholile futhi sengikulungele ukubuyela empini elandelayo.”
Uthe imimoya iphezulu eNaturena njengoba belungiselela umdlalo olandelayo. Into ebusa amakhanda abo wukuhlobisa umlando weqembu elisanda kuhlanganisa iminyaka engu-50 ngokufaka inkanyezi ebhejini.
“Amalungiselelo ahambe kahle kakhulu. Sesiyakwazi okumele sikulindele kwiWydad futhi kulokhu sinokuzethemba okwengeziwe. Isimo sihle kakhulu eqenjini futho wonke umuntu usebenza kanzima ukulungiselela lo mdlalo,” kuphetha uSasman.
Abadlali beChiefs kuzomele bazibambe ziqine ngempela njengoba abadlali beWydad sebethenjiswe izizumbulu zemali uma bengakwazi ukujikela iChiefs bayishiye idumele.
Kodwa oweChiefs umsebenzi usulula njengoba idinga ukudlala ngokulingana nje kuphela ukuze ingene kowamanwamu. Ukuwina kungaba yobhonasi enhle kakhulu.
Previous Previous post: Ngabe uKada ngumgadli weChiefs omusha?
Next Next post: UMusona ushwebise iChiefs, Pirates neSundowns ebuyela phesheya